लामो समयसम्म के हुन्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki बोक्न-माथि
मान्नुहोस् कि तपाईं एक ऋण लिनु वा बैंकको लागि अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ?
त्यसपछि यो एक ठूलो भूमिका खेल्दछ कि तपाईं आफूलाई सबै प्रकारका चीजहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ र यो पनि समावेश गर्दछ बोक्न-माथि, यो वास्तविक क्रेडिट सम्झौताको विस्तार हो। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाइँ एक निश्चित अवधि भित्र ऋण फिर्ता गर्नु पर्छ।
यसबाहेक, तथापि, यो अझ बढ्दो छ कि ब्याज अझै पनि यो ऋण मा चार्ज गरिनेछ। सामान्यतया, तथापि, यो एक निश्चित ब्याज दर हो र चर चर छैन। लामो समयदेखि लामो समयसम्म प्रयोग गरिन्छ यदि तपाईं निश्चित समय पछि सूचना दिनुहुन्छ कि तपाइँ समय अवधि भित्र ऋण फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। ती अझै पनि धेरै मेहनत गर्न सक्दछन्, तर महिनाको अन्त्यमा केही पनि बाँकी छैन।
लामो समयसम्म बैंकको लिखित अनुरोध हो। त्यो हो, तपाईं एक क्रेडिट एक्सटेन्सनको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ। ढाँचा अनुबंध पूर्ण रूपमा पुन: परिभाषित गरिएको छ। उनीहरूलाई नयाँ मानहरू दिन्छन् र त्यसपछि छापिएको छ। यद्यपि, तपाइँलाई थाहा छ कि यो क्रेडिट आवश्यक पर्दैन। बैंकले रोल्लोवरलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्न पनि सक्छ। त्यसपछि तपाईसँग समस्या छ।
यदि, तथापि, यसले तपाईंलाई भुक्तानीमा कठिनाइहरूको अनुभव गर्दैछ जस्तो देखिन्छ, र तपाईले थप भुक्तानीहरू गर्न सक्नुहुन्न, बैंक थप लामो समयसम्म सन्तुष्ट हुनु पर्ने हुन्छ किनकी यसले तपाईंलाई भुक्तान फिर्ता गर्ने मौका दिन्छ। यो भुक्तानी धेरै उच्च हुनु हुँदैन। जब तपाईं एक ऋण समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाईले चाँडै नै थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ भुक्तानी प्रतिबद्धता गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा, तपाईं पैसा चुकाउनु पर्छ र, आपतकालीन अवस्थामा भने, तपाईं दोषी हुनेछ। तपाईंले ऋणको दरहरू सेट गर्न आवश्यक छ ताकि तपाइँ मासिक किस्तहरू भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। ऋण लामो समय सम्म विस्तार गरिनेछ, तर यो केहि परिस्थितिहरुमा बाधा नपुगेको छ। तपाईंले निश्चित रूपमा सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ ऋण फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिट जितनी चाँडै तिर्नु पर्दछ। त्यसैले तपाईं पनि सबै भन्दा राम्रो नियन्त्रण गर्न र लामो समयदेखि टाढा राख्न सक्नुहुन्छ। अधिकांश मानिसहरू एक ऋण लिन्छन् किनभने तिनीहरू कार वा घर खरीद गर्न चाहन्छन्। त्यसपछि तपाईले पनि आफ्नै आयको नजिकको अवलोकन गर्नुपर्छ।
तपाईलाई सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ कि तपाइँ मासिक तनहुँ तिर्न सक्नुहुन्छ कि। यदि धेरै देनदारहरू छन् भने, स्थितिको ट्रयाक राख्न गाह्रो हुन सक्छ, र एक लामो समयको अन्तिम बाटो हो। सामान्यतया, तथापि, यो शब्द को अन्त तिर केवल स्पष्ट छ। कुनै पनि अवस्थामा, यदि तपाईं आफ्नो बैंक सल्लाहकार खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई राम्रो सल्लाह दिइनेछ। तपाईंले निश्चित गर्नु पर्छ बैंक तिनीहरूको लागि कुनै पनि मामलामा छ र तपाईलाई भेट्न तयार छ। त्यसोभए तपाईं लामो समयसम्म दरहरू समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई व्यक्तिगत ईर्ष्याको डर मान्नु हुँदैन। तपाईं प्रवर्तनबाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ। एक ऋण आज लागू गर्न सकिन्छ। तर तपाईंले सुरक्षित राख्नुहुनेछ यदि तपाईं जितनी कम दर जित्नुहुन्छ। यद्यपि अवधि विस्तार गरिएको छ, तर घर मा यो कुनै पनि मामला मा सार्थक हुनेछ। कारमा, मार्केट मान धेरै छिटो हुन्छ। यसकारण, तपाईं यो खतरा लिन चाहानुहुन्छ कि सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईलाई कुनै पनि अवस्थामा जमानत चाहिन्छ।
अर्को लेखनकारात्मक ऋण